Road (final chapter) by donjaun | Steem
Road (final chapter) by donjaun
myanmar · @donjaun · Jul 12
Road (final chapter)
ထိုရေမြောင်းက မိုးတွင်းအခါဆိုလျှင် ရေတော်တော်လေး စီး၏။ ကျန် ရာသီ အချိန်များဆိုလျှင်တော့ ရေသိပ်မရှိလှပေ။ ပြောရလျှင်တော့ ရက်ကွက်၏ ရေထုတ်မြောင်း တခု ဖြစ်၏။ ထိုမြောင်းဘေး (ယခု ပြင်သည့်လမ်း) လမ်းကို ယခင်တုန်းကတော့ ဘေးအုတ်ခုံလေးများနှင့် စီထား၏။ ယခု လမ်းပြန်ပြင်လိုက်သည့် အခါမှတော့ ပလပ်ဖောင်းနှင့် သံလက်ရမ်းတန်းလေးများနှင့် ကာရန်ထားပေးလိုက်၏။ ပလပ်ဖောင်းနှင့်ဆိုတော့ လမ်းလျှောက်သူများအတွက် ဘေးကင်းတာပေါ့။ သို့ပေမယ့် လမ်းပေါ်တင်မည့် ရေအတွက်တော့ ရေထုတ်မြောင်း မရှိပေ။
ယခင်တုန်းကတော့ အနှီလမ်းသည် မိုးရွာလိုက်ပါက ရေတင်တတ်ပြီး ထိုရေများက လမ်းဘေး အုတ်ခုံလေးများကနေ တဆင့် ရေမြောင်းထဲသို့ ရောက်သွားလေ့ ရှိ၏။ ယခု ပလပ်ဖောင်းနှင့် လမ်းကလေးကို အဆင့်မြင့်တင်လိုက်သည့်အခါမှာတော့ ရေထုတ်၊ ရေထွက်ပေါက်လေးများ မပါသည်ကို သတိထားမိ၏။ မိုးရွာလျှင် ရေမတင်တော့အောင်ဘဲ လမ်းကို အဆင့်မြင့်ပြီး ခင်းလိုက်သလားပေါ့။ အဘယ်ကြောင့် ပလပ်ဖောင်း၏ အောက်ခြေ နေရာ အချို့မှာ လမ်းပေါ်မှာ ရေများ ထွက်သွားစေဖို့ အပေါက်ငယ် မဖောက်ထားသလဲပေါ့။
မိုးက လူလူသူသူလည်း ရွာရော အထက်က ကျနော် တွေးပူမိသည့် ကိစ္စက ပေါ်လာတော့၏။ လမ်းပေါ်မှာ ရေများတင်ကျန်နေ၏။ မိုးတွင်းမိုးရွာတာပဲ လမ်းပေါ်မှာလည်း ရေတင်မှာပေါ့ဟု ပြောစရာ ရှိ၏။ ယခင်တုန်းက ထိုလမ်းလေးက ထိုသို့ အချိန်အကြာကြီး ရေတင်လေ့ မရှိပေ။ မြောင်းဘက်ခြမ်းမဟုတ်သည့် ဒီဘက် ရေကန်ဘက်ခြမ်းမှာပဲ ရေတင်ကျန်လေ့ ရှိ၏။ ယခု လမ်းပြင်ပြီးချိန်မှာတော့ အခြေအနေက ပိုဆိုးသွားတော့၏။ ပလပ်ဖောင်းများက အပိတ်များ ဖြစ်နေသဖြင့် မိုးတိတ်သွားပြီးသည့်တိုင် ရေများက လမ်းပေါ်မှာ တင်ကျန်နေတော့၏။ ဆိုးလိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း။
သို့ပေမယ့် ထိုဖြစ်ရပ်လေးက သိပ်မကြာလိုက်ပေ။ မြို့၏ တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေး၏။ ပလပ်ဖောင်း၏ အချို့နေရာများမှာ ရေများ ဆင်းရန်၊ ထွက်ရန် ရေမြောင်းငယ်လေးများ ဖောက်ပေးလိုက်၏။ အဆင်ပြေသွား၏။ ဤနေရာမှာ နည်းနည်း အတွန့်တက်စရာ ရှိ၏။ လမ်းစလုပ်၊ ပလပ်ဖောင်း စလုပ် ကတည်းက ဘာလို့ ရေမြောင်း သေးသေးလေးတွေ ထည့်မလုပ်ခဲ့တာလဲပေါ့။ ခုမှ လုပ်တော့ ပလပ်ဖောင်း အကောင်းတွေကို တူးဆွ ဖောက်ပြီးမှ မြောင်းလုပ်ရသည်ကိုး။
ထိုကဲ့သို့ နောက်မှ ပြန်လိုက်လုပ်ရသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ပိုက်ဆံ ထပ်မကုန်တော့ဘူးလား။ တာဝန်ရှိသူ တဦးဦးမှ နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးထဲမှ ထပ်မံ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း မရှိဘဲ အိတ်စိုက်ပြီး ပြုပြင် ပေးလိုက်သလားပေါ့။ စကတည်းက တပါတည်း လုပ်ခဲ့ရမည့် အလုပ်ကို အဘယ်ကြောင့် နောက်မှ ပြန်လည်ပြီး လုပ်ယူသနည်း။ ထို နောက်မှ လုပ်ယူသည့် အလုပ်က ပိုက်ဆံ မကုန်ဘဲ အလကား လုပ်လို့ ရပါ၏လော။ ကျနော့်လို မကျွမ်းကျင်သည့် သူတယောက်တောင် ထိုကဲ့သို့ ရေထွက်ပေါက် လေးများ လုပ်သင့် လုပ်ရမည်ကို သိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူများက ထိုကိစ္စကို မသိဘူးတဲ့လား။ ယခု ကိစ္စသည် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်လမ်းကို ပြင်ဆင်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ အများသူငါ အသုံးပြုနေသည့် နိုင်ငံပိုင်လမ်းကို နိုင်ငံတော် ငွေနှင့် ပြုပြင်ခြင်း ဖြစ်၏။ အမှား အယွင်းနည်းအောင်၊ လိုအပ်ချက် မရှိအောင်၊ ထပ်မံ ကုန်ကျရခြင်း မရှိအောင် သေသေချာချာလေး လုပ်ဆာင်သင့်သည် မဟုတ်လော။ ကျနော်တို့သည် မကုန်သင့်သည့် နေရာမှာ မကုန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှ အခြား လိုအပ်သည့် နေရာများ အတွက် သုံးရန် အသုံးစရိတ်များ ပိုလျှံလာနိုင်သည် မဟုတ်လား။ အခုတော့ …
👍 curie, mariusfebruary, tombstone, c-squared, steem-myanmar, camelot, donjaun, domelay, vact, wackou, hendrikdegrote, ansoe, nyinyiwin, htwegyi, sawlwin, arcange, goblinknackers, suhlaing, map0226, uthantzin, billionairehein, erikaflynn, macoolette, lwanwai, choogirl, aggamun, travisung, tinhlaingoo, a0i, eric-boucher, blueorgy, randomwanderings, massivevibration, golden.future, steemph.manila, sarez, yaelg, rival, locikll, smartdealear, myintlwinsoe, jiujitsu, tensor, joshman, buttcoins, alexworld, drmake, torico, qberry, melissaofficial, didic, blewitt, revo, schroders, yomismosoy, sumotori, oghie, raphaelle, iansart, liberosist, mammasitta, whoib, warpedpoetic, longer, and 99 others
"Road (final chapter)"
wackou0B 41,348,546,849 0.72%
tombstone0B 117,574,779,521 0.48%
mindstabber0B 347,976,740 100%
eric-boucher0B 4,371,310,199 1.2%
anwenbaumeister0B 84,509,494 2.4%
mammasitta0B 567,263,764 0.12%
arcange0B 20,268,749,805 2%
blueorgy0B 4,133,828,550 1.8%
liberosist0B 604,796,281 2.4%
raphaelle0B 692,281,565 2%
psygambler0B 116,117,978 1.2%
lk6660B 477,246,555 1.2%
whoib0B 559,103,858 70%
curie0B 778,394,387,498 2.4%
velocity0070B 66,436,874 100%
hendrikdegrote0B 32,169,449,194 2.4%
vact0B 46,611,804,561 2.4%
dashfit0B 224,857,085 1.2%
steem-myanmar0B 60,357,041,073 100%
erikaflynn0B 7,820,375,931 20%
annazsarinacruz0B 334,872,166 11.05%
gmedley0B 150,412,204 1.2%
camelot0B 59,153,493,510 100%
choogirl0B 5,415,187,360 11.05%
iansart0B 619,943,879 1.2%
kennyroy0B 173,992,525 5.52%
jiujitsu0B 1,790,825,019 1.2%
lekang0B 302,762,568 1.2%
zerotoone0B 250,888,362 1.2%
locikll0B 2,080,952,540 4.8%
aboutyourbiz0B 432,496,828 2.4%
cryptokrieg0B 385,018,500 2.4%
rival0B 2,343,474,177 2%
tensor0B 1,766,107,391 1.2%
zacherybinx0B 235,320,076 2.4%
domelay0B 48,512,526,165 100%
donjaun0B 49,928,864,127 100%
allcapsonezero0B 219,073,784 1.2%
neumannsalva0B 352,467,321 1.2%
nyinyiwin0B 25,629,857,862 100%
ansoe0B 32,096,383,349 100%
tinhlaingoo0B 4,550,916,300 100%
cepul0B 348,381,016 11.05%
revo0B 903,402,229 1.2%
vadimlasca0B 111,473,810 11.05%
massivevibration0B 3,610,859,230 5%
eurodale0B 80,535,456 1.2%
clweeks0B 70,014,426 1.44%
torico0B 1,171,277,269 4.42%
joshman0B 1,461,079,022 0.19%
htwegyi0B 22,394,484,539 75%
dokter-purnama0B 123,003,455 1.2%
cryptononymous0B 254,214,047 1.2%
sku77-poprocks0B 251,797,976 2.4%
buttcoins0B 1,445,825,655 0.48%
emdesan0B 140,107,008 10%
peaceandwar0B 330,998,492 1.2%
lwanwai0B 6,987,100,046 80%
joendegz0B 124,525,940 1.2%
steemph.manila0B 2,883,451,500 22.11%
nicole-st0B 127,636,261 1.2%
drmake0B 1,260,738,642 1.2%
skycae0B 273,526,290 2.4%
xanderslee0B 92,430,130 2.4%
kenadis0B 260,239,268 1.2%
maticpecovnik0B 314,133,432 0.96%
onemedia0B 156,632,649 2.4%
thescubageek0B 122,229,523 1.2%
danaedwards0B 221,277,991 2.4%
bitcoinportugal0B 544,367,629 50%
stahlberg0B 504,187,663 1.2%
gabrielatravels0B 196,845,346 0.6%
reizak0B 161,626,527 0.96%
zlatkamrs0B 97,312,682 2.28%
uthantzin0B 9,779,374,815 100%
mattiarinaldoni0B 361,130,939 11.05%
hijosdelhombre0B 82,794,485 0.12%
suhlaing0B 13,966,268,403 100%
sawlwin0B 20,855,510,841 100%
shinedojo0B 238,027,721 2.4%
bennettitalia0B 138,819,920 0.6%
billionairehein0B 8,284,729,192 50%
vilda0B 159,806,906 50%
mininthecity0B 82,548,088 1.92%
randomwanderings0B 3,791,706,916 15%
aggamun0B 5,184,887,187 40%
didic0B 933,605,284 1.2%
warpedpoetic0B 556,216,105 2.4%
operahoser0B 158,847,387 0.36%
myintlwinsoe0B 1,819,098,991 100%
oghie0B 759,915,687 50%
vegan.niinja0B 114,120,845 1.2%
jbrrd0B 71,379,244 20%
ivan-g0B 277,138,703 1.2%
zipporah0B 493,076,791 0.48%
cryptofuwealth0B 84,703,142 11%
ambitiouslife0B 106,717,520 1.2%
positiveninja0B 239,489,387 1.2%
a0i0B 4,495,293,798 2.4%
sanderjansenart0B 261,578,157 1.2%
qberry0B 1,143,022,856 1.2%
gabyoraa0B 465,636,954 11.05%
shwemon0B 183,649,847 100%
adalbertodrums0B 69,552,565 11.05%
mariusfebruary0B 121,888,318,908 0.72%
kendallron0B 156,687,719 11.05%
lazybird0B 83,235,345 20%
smartdealear0B 1,910,407,639 100%
goodway0B 158,143,033 1%
ntowl0B 162,808,811 0.72%
alexworld0B 1,291,004,370 50%
gracelbm0B 88,782,000 1.2%
niouton0B 77,772,984 0.48%
jorgeddln0B 145,137,933 11.05%
schroders0B 896,219,128 0.72%
hardaeborla0B 80,606,733 1.2%
melissaofficial0B 1,077,154,169 2.4%
sarez0B 2,669,354,460 15.47%
yogaspirit0B 273,111,812 100%
urme330B 410,479,957 1%
longer0B 549,083,061 50%
blewitt0B 924,014,654 0.16%
kafupraise0B 200,266,209 50%
hhtb0B 73,130,924 1.2%
ilovecryptopl0B 303,826,937 1.92%
yomismosoy0B 776,618,472 50%
bflanagin0B 533,352,419 1.2%
yestermorrow0B 186,859,945 0.72%
hansmast0B 150,163,191 1.2%
goblinknackers0B 18,226,908,353 7%
wallyt0B 93,062,638 0.96%
wstanley2260B 65,460,805 50%
yaelg0B 2,557,770,168 5%
c-squared0B 96,205,400,501 22.11%
shepherd-stories0B 124,144,190 11.05%
annaabi0B 193,117,729 1.2%
trang0B 185,547,656 1.2%
rhethypo0B 80,841,963 1.2%
chickenmeat0B 362,148,115 1.2%
macoolette0B 6,999,302,679 1.2%
javier.dejuan0B 487,580,578 2.4%
qwoyn0B 171,306,343 0.24%
reverseacid0B 165,946,152 1.2%
eu-id0B 421,034,031 10%
alvin06170B 172,199,134 1.2%
solarphasing0B 386,482,325 5%
priyankachauhan0B 129,989,508 1.92%
travisung0B 4,582,913,862 1.2%
goodcontentbot0B 58,043,191 50%
herculean0B 69,523,142 50%
pulleyhead0B 103,072,936 2.4%
bluemaskman0B 122,549,854 1.2%
breakout1010B 242,124,029 1.2%
chrisluke0B 164,439,565 26%
sumotori0B 762,634,917 75%
mrbarckhoff0B 64,180,995 25%
crivec680B 503,220,156 5.52%
idlejack0B 337,918,596 20%
alfatron7770B 140,750,433 0.96%
map02260B 11,094,275,668 100%
c2-myanmar0B 140,188,655 24.12%
golden.future0B 3,517,905,379 50%
midlet-yourpal0B 194,917,691 11.05%
@htwegyi · Jul 13
နှစ်ခါလုပ် နှစ်ခါတောင်း နှစ်ခါရတာပ လေ
@c-squared · Jul 13
<div class="pull-left">https://cdn.steemitimages.com/DQmaSUWYsJ3AMUEMRqCSaoKJVNvtsbKm4fNAtmTidr8Uggc/C%20Squared%20Logo%20Transparency%20200px.png</div><br>ပိုစ့်ရွေးချယ်ပေးသူများ၏ <a href="https://discord.gg/B8JFmJ4">@c-squared Curation Collective Discord community</a> ရှိ မြန်မာ ရွေးချယ်ပေးသူ ချန်နယ်တွင့် မျှဝေထားသော အထက်ပါပိုစ့်ကို @c2-myanmar အဖွဲ့အစည်းအကောင့်မှ ကိုယ်တိုင်စိစစ်ရွေးချယ်ပြီးနောက် မဲပေးခြင်းနှင့် မျှဝေပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။<hr>This post was shared in the #burmese-curation channel in the <a href="https://discord.gg/B8JFmJ4">@c-squared Curation Collective Discord community</a> for curators, and upvoted and resteemed by the @c2-myanmar community account after manual review.  @c-squared runsa<a href="https://steemit.com/witness/@c-cubed/announcing-the-launch-of-the-new-c-squared-witness">community witness</a>. Please consider using one of your witness votes on us <a href="https://steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=c-squared&approve=1">here</a>
sbi70B 53,067,755,270 20.44%